Ndị nyocha UCLA na-egbu oge ịka nká na ijiji mkpụrụ osisi, nwere ike ịsụgharị ya na mmadụ - Ụwa 2022
Ndị nyocha UCLA na-egbu oge ịka nká na ijiji mkpụrụ osisi, nwere ike ịsụgharị ya na mmadụ
Ndị na-eme nchọpụta na Mahadum California, Los Angeles (UCLA), na-ekwu na mkpụrụ ndụ ihe nketa nke metụtara ọrịa Parkinson nwere ike ịbụ isi ihe na-eme ka ogologo ndụ mmadụ dịkwuo ogologo, dị ka akwụkwọ akụkọ si kwuo.
N'ime nnyocha e bipụtara na The Proceedings of the National Academy of Sciences, ndị nchọpụta na-ekwu na ha chọpụtara na mmụba nke mkpụrụ ndụ ogige ntụrụndụ na ijiji mkpụrụ osisi toro eto mụbara ma nkezi na ogologo ndụ ha, ma na-egbu oge mmalite nke ịka nká. Ijiji ndị nwere ọkwa mgbatị ahụ gbagoro agbagoro biri pasenti 25 karịa ijiji nọ n'otu njikwa, ebe ọ na-anọgide na-adị mma ma na-arụpụta ihe.
"Nchọpụta ndị a na-ekpughe ọrụ Parkin na-arụ n'ịgbanwe ịka nká nke anụ ahụ ma na-enye nghọta n'ime usoro molekụla na-ejikọta ịka nká na neurodegeneration," ka ndị nchọpụta dere.
A maara Parkin nwere opekata mpe ọrụ abụọ: ọ na-akara protein ndị mebiri emebi ka enwere ike tụfuo ha tupu ha aghọọ mkpụrụ ndụ nsi na ọ na-ekere òkè n'iwepụ mitochondria mebiri emebi. N'ụzọ dị mwute, onye isi akwụkwọ nyocha ahụ, David Walker na-ekwu, usoro mkpofu cellular a na-ebelata ka ndị mmadụ na-eme agadi, nke nwere ike ibute ọrịa na neurodegeneration. Mana ihe ọmụmụ a na-egosi bụ na mmụba n'ọkwa ogige ntụrụndụ na-enye usoro ahụ nkwalite, nke nwere ike igbu oge mmalite nke ọrịa ndị metụtara afọ dịka ọrịa Parkinson na Alzheimer, yana ịbawanye ogologo ndụ.
Ndị nchọpụta ahụ chọpụtara na oke ogige ntụrụndụ nwekwara ike ịkpata mmebi. Mgbe ha nyere ijiji ahụ nnukwu ogige, ọ malitere ikpochapụ protein ndị dị mma, ijiji wee nwụọ ngwa ngwa karịa ndị nọ n'otu njikwa.
Ndị otu a amabeghị ọkwa ogige ntụrụndụ dị mma maka ụmụ mmadụ, mana ha kwenyere na ijiji mkpụrụ osisi bụ ezigbo ihe atụ iji mụọ ịka nká mmadụ.